Fannaankii Cabdi Cali Bacalwaan oo ku geeriyooday dalka Jarmalka
Home Fanka iyo Sugaanta Fannaankii Cabdi Cali Bacalwaan oo ku geeriyooday dalka Jarmalka
Waxaa Allaha u naxariistee dalka Jarmalka uu ku geeriyooday fannaanka Cabdi Cali Bacalwaan, oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay halkaas.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida fannaanka oo ka mid ahaa fannaantii dalka kuwooda ugu muddada dheer uguna caansan.
Bacalwaan wuxuu sidoo kale ahaa laxamiiste, wuxuu sheegay in heestii ugu horreysay ee uu laxanka saaro ay ahayd heestii `Hoheey Afrikaay Huruddooy` ee ay qaaddo Allaha u naxariistee Xaliimo Khaliif Magool.
Fannaanadda Khadiijo Foodey Nuur oo ka tirsaneyd kooxdii Hoballada Waaberi isla markaana aqoon fiican u leh Bacalwaan ayaa BBC-da uga warrantay qofka uu ahaa Bacalwaan.
“Bacalwaan wuxuu ahaa qof dhan walba ku fiican, haddii ay noqoto jilliinka iyo heesaha. Wuxuu ahaa qof ka dhex muuqday fannaaniinta, qof furfuran ayuu ahaa oo ay fannaaniinta iyo bulshaduba jecleyd.”
Khadiijo Foodey ayaa sheegtay in markii ay dagaallada sokeeye dalka ka qarxeen, uu Bacalwaan ka mid ahaa fannaaniinta qaxday. Sanadihii 1990-meeyadii ayay sheegtay inuu soo galay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya, halkaas oo uu ka aaday dalka Jarmalka oo uu muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa.
Previous articleXogta Maraykanka oo xidhay safaaradoodii Ciraaq
Next article“Waxaanu Leeyahay Farmaajo, Ha ku Firikin Inay Muqdisho Mar Kale Xukunto Hargeysa..” Xildh Qabile